Iibhafu ezakhelwe ngaphakathi, isisombululo esihle kwigumbi lakho lokuhlambela | Bezzia
Iibhafu ezakhelwe ngaphakathi, isisombululo esihle kwigumbi lakho lokuhlambela
UMaria vazquez | 14/01/2022 18:00 | Ifenitshala
Ngaba unegumbi lokuhlambela elincinci okanye elinesityalo esinzima? Akukho nanye kwiibhafu ozifumanayo emarikeni ekuqinisekisayo? Ezi zizathu akufanele zenze ukuba ulahle ukuba nebhafu kwindawo yokuhlambela. Iibhafu ezakhelwe ngaphakathi Zisisisombululo esihle esingayi kukuvumela kuphela ukuba wenze uninzi lwendawo, kodwa kwaye uzenzele ukuba ulungele wena.
Ukukhetha ibhafu eyakhelwe-ngaphakathi yenye yeendlela ezininzi esinazo zokubonelela igumbi lokuhlambela ngesithuba esifanelekileyo sokuhlambela. Iingenelo zolu khetho, ngaphezu koko, zininzi. Kwaye kunjalo ungakhetha indlela ofuna ngayo: isikwere okanye uxande? Ikhonkrithi epholisiweyo okanye nge-ceramic coating?
1 Izinto eziluncedo kwiibhafu ezakhelwe ngaphakathi
2 Izinto zokuhlambela zangoku
Izinto eziluncedo kwiibhafu ezakhelwe ngaphakathi
Iibhafu ezakhelwe ngaphakathi ziyakuvumela lungisa le nto kwiimpawu zegumbi lakho lokuhlambela. Kwaye esi sisizathu esibaluleke ngokwaneleyo sokubheja kubo kumagumbi okuhlambela amancinci okanye anzima ngenxa yoyilo lwabo okanye uyilo. Ithuba lokuyenza ngokwezifiso yenye yeenzuzo zolu hlobo lwebhafu, kodwa kukho ngaphezulu!
Ziyisisombululo esifanelekileyo sokubonelela ngebhafu amagumbi okuhlambela aneempawu ezinzima ekubeni benziwe umlinganiselo.
Ngokwenza ngokwezifiso unako khetha ubungakanani, imilo kunye nobude yebhafu ukuyiqhelanisa ngeyona ndlela ilungileyo kokubini kwigumbi lakho lokuhlambela kunye nosapho lwakho. Ukusuka kwibhafu yakudala eyixande, ukuya kwisikwere okanye kwikona enye, kutheni kungenjalo?
Unako kwakhona khetha izixhobo zombini ngaphandle kunye nangaphakathi ebhafini, ngaloo ndlela uziqhelanisa nobuhle okanye isitayile osikhangelayo.
Baya kukuvumela ukuba udibanise isambatho sokuhlambela. Unokugubungela ibhafu kunye nengubo efanayo oye wasebenzisa umgangatho okanye iindonga, ngaloo ndlela ufezekisa indawo yanamhlanje kunye necocekileyo njenge-spa.
Ukuze ezi zibonelelo zingafiphazwa kwixesha elizayo ngenxa yeengxaki zokufuma okanye ukuvuza, kuya kufuneka phathisa ingcali ukuze iphunyezwe. Ukungangeni kwamanzi okufanelekileyo kubalulekile ukubathintela, ngoko ke buza kwaye u-odole umsebenzi kwinkampani okanye kwingcali eneembekiselo.
Izinto zokuhlambela zangoku
Imarble, i-ceramics, i-microcement, ikhonkrithi epholisiweyo, iipeyinti zobugcisa ezinokumelana okuphezulu nokufuma ... Ezi zezona zinto zifunwa kakhulu namhlanje ukugubungela zombini iibhafu ezakhiweyo kunye nemigangatho kunye neendonga. amagumbi okuhlambela angoku kunye nanamhlanje njengazo sizicebisa kuwe namhlanje.
Noko ke, asinakuthi bonke aba bakhankanyiweyo, nangona kunjalo, babalasele ngokufanayo. Kukho ezimbini eziphuma phambili kwezinye kwaye mhlawumbi sele uzifumene kwimifanekiso. Ngqo! Omnye wabo ngu i-microcement, apho umgangatho ubuye ugqunywe ngokuqhelekileyo, ngaloo ndlela ufezekisela umgangatho oqhubekayo kuwo omabini amagumbi okuhlambela ase-rustic kunye nanamhlanje.
kwaye ethandwa njenge i-microcement ukunxiba la magumbi okuhlambela ngebhafu eyakhelweyo zizinto ze-ceramic. Ezi zisenokusetyenziswa zombini kwiindonga kunye nemigangatho kunye neendawo zokubala zeesinki, ngaloo ndlela sifezekisa loo mvakalelo ye-spa ebesithetha ngayo ngaphambili. Iithayile kwiifomathi ezinkulu kunye neethoni ezingwevu zezona zifunwa kakhulu kodwa, ngokuqinisekileyo, ayizona kuphela iinketho kwimarike.
Ukuba sithetha ngeebhafu ezakhelwe ngaphakathi kunye nezigqubuthelo zamagumbi okuhlambela, makhe sithethe nangeendlela. Dibanisa iingubo zokwaleka yegumbi lokuhlambela namhlanje umkhwa. Ewe, ayisiyonto nje into yokuba uninzi lwemifanekiso esikhuthazayo namhlanje ifumane obu buhle buncinci kunye nobucocekileyo obubanika isambatho esikhethekileyo. Ubuhle obukumema ukuba uphumle kwaye asiyiyo le nto siyifunayo xa sihlamba?
Ngokuqinisekileyo ayinguye wonke umntu othanda le ndlela kwaye uzimisele ukuyilungelelanisa. Ukuba unaloo mbono, ungabheja usebenzisa i-coating efanayo kwibhafu eyakhelwe-ngaphakathi kunye nodonga okanye umgangatho, ukubheja kwezinye izinto ze-ceramic okanye ukhuni ukwenza umahluko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ifenitshala » Iibhafu ezakhelwe ngaphakathi, isisombululo esihle kwigumbi lakho lokuhlambela
ukudakumba ebantwaneni nabakwishumi elivisayo